Posted by: chhepyastra weekly | जुलाई 3, 2010
नेपाली जनता माओवादीका नेतृत्वमा शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हेर्न चाहन्छन्
वर्षमान पुन, स्थायी समिति सदस्य- एकीकृत नेकपा माओवादी
० अन्ततः प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आयो सरकार गठनका लागि माओवादी कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
अहिलेको सरकारले संविधान निर्माण गर्ने वातावरण बनाउन सक्दैनथ्यो । यो सरकार कठ्पुतली थियो, असंवैधानिक थियो । यो सरकारले शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्दैनथ्यो । हामीले यो सरकार गठनसागै शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता पाउादैन, त्यसकारण अविलम्ब राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ भन्दै आएका थियौा । अहिले आएर हामीले भन्दै आएको कुरा पुष्टि भएको छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउनु सकारात्मक पक्ष हो । संविधानका अन्तरवस्तुहरू, शान्तिप्रक्रियाका समझदारीहरू बनाएर शान्ति र संविधान बन्ने ग्यारेन्टी साथ राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने अनि हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने पहल हामी गरिरहेका छौा । हाम्रो मुख्य पहल हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने हुन्छ ।
०	भनेपछि, अब तपाईं आˆनो पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
हामी हाम्रो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौा । हामीलाई नेतृत्व गर्ने म्यान्डेट जनताले दिएका छन् । माओवादी पार्टीबाहेक २४ वटै पार्टी मिल्दा पनि संविधान बनाउन सक्दैनन् । नेपाली जनताले माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउनुको मुख्य कारण हामीले उठाएको राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा संघीयता मुद्दा, धर्मनिरपेक्षता मुद्दा, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा नै हुन् । हामीबाहेक अरु सबै पार्टी मिल्दा पनि संविधान लेखिन सम्भव छैन । जनताले पुराना पार्टीहरूले पुरानै खालका संविधान बनाउलान् भनेर खबरदारी स्वरूप हामीलाई चालीस प्रतिशत मत दिएका हुन् । नेपाली जनता माओवादीको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको हेर्न चाहन्छन् । कााग्रेस, एमालेलगायतको बाइस दलीय गठबन्धन असफल भइसक्यो । गठबन्धन असफल भएपछि स्वतः मुख्य प्रतिस्पर्धाले सरकारको नेतृत्व पाउाछ । यो उसको नैतिक अधिकार पनि हो । सबैतर्फबाट माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्ने आधार छ । त्यसकारण हामी हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास गरिरहेका छौा ।
०	अबको सरकारको नेतृत्व तपाईंहरूको पार्टीले गर्ने त भन्नु भो त पार्टीभित्र नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा विवाद चुलिएको छ भनिन्छ नि ?
यी सबै मिडियामा चुलाइएको विवाद मात्र हो । हाम्रो पार्टीभित्र नेतृत्वको विषयमा कुनै विवाद छैन । विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला कााग्रेसको पार्टी सभापति हुादा कहिले भट्टराई, कहिले देउवा प्रधानमन्त्री भएर पार्टी फुट्यो, त्यस्तै राप्रपामा सूर्यबहादुर थापा पार्टी अध्यक्ष हुादा लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पार्टी फुट्यो, पछिल्लो समय एमालेका पार्टीनेता झलनाथ तर प्रधानमन्त्री माधव नेपाल हुादा एमाले पार्टीमा किचलो देखापर्‍यो । यसको अर्थ हाम्रो पार्टी ठ्याक्कै कााग्रेस, एमालेजस्तो भन्दा त होइन तर पनि पार्टीको नेता सरकारको नेतृत्वमा जाादा क्रान्तिका आवश्यकताहरू पूरा हुन्छ, पार्टी एकताबद्ध हुन्छ । शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी अध्यक्षमा बढी हुन्छ । त्यसकारण अध्यक्ष नै नेतृत्वमा सरकारमा जाादा राम्रो हुन्छ । हाम्रो पार्टीभित्र अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्नेमा कुनै विवाद छैन । बाहिरबाट सञ्चार माध्यममा मात्र विवाद बनाइएको हो, पार्टी एकढिक्का भएर अगाडि बढिरहेको छ अझ अगाडि बढिरहन्छ ।
० तपाईं एककृत माओवादी पार्टीभित्रको शक्तिशाली युवानेता हुनुहुन्छ र सबैको अशाको केन्द्र पनि हुनुहुन्छ तर तपाईंमाथि कहिले कतै, कहिले कतै गुटबन्दीमा लाग्नुभएको छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?
यी सबै आरोप मात्र हुन् । हाम्रो पार्टीमा गुट, उपगुट भन्ने नै छैन । हाम्रो पार्टी विगत दश-पन्ध्र वर्षदेखि एकीकृतरूपमा अगाडि बढिरहेको छ । हामीसाग व्यक्तिगत स्वार्थ नभएर नै यो सम्भव भएको हो । हामीसाग क्रान्ति कसरी पूरा गर्ने भन्ने स्वार्थ मात्र छ । हाम्रो पार्टी अन्य पार्टीजस्तो कदापि होइन । हाम्रो पार्टीसाग उन्नाइस हजार जनमुक्ति सेना छ तेह्र हजारभन्दा बढी नेपालीका छोराछोरीले हाम्रो पार्टीको आहृवानमा बलिदानी गरिसकेका छन् । प्रचण्ड, किरण, बाबुराम वा बादलले प्रधानमन्त्रीको लागि मरिहत्तै गर्नुभयो भन्ने त्यो अस्वभाविक हुन जान्छ । सहिदको रगतप्रति धोखा हुन्छ । त्यसैले कसैले व्यक्तिगत ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्छ, गुटबन्दी गर्छ, त्यस्तो सोच जसले राखे पनि स्वीकार्न सकिादैन । क्रान्तिको सर्तमा नेताहरूलाई सहयोग गरिन्छ । अध्यक्ष कमरेडलाई पनि सहयोग गर्दै आएको हो । अन्य आदरणीय नेताहरूलाई पनि क्रान्ति पूरा गर्ने स्वार्थमा मानिन्छ । तर, उहााहरूले नै गुटबन्दी गर्न थाल्नु भो भने हामी त्यस्ता गुटबन्दी कदापि स्वीकार गर्दैनौा । मेरो’boutमा मिडियामा जुन चर्चा गरिएको छ, त्यो नितान्त चरित्र हत्या हो, यस कुराप्रति म व्यक्तिगतरूपमा खेद प्रकट गर्न चाहन्छु ।
०	शान्तिप्रक्रियाको मुख्य मुद्दा सेना समायोजनको प्रक्रिया अहिले कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
सेना समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्न अहिलेको कठ्पुतली सरकारबाट सम्भव थिएन । अब नयाा सरकार गठन भए जनमुक्ति सेना सरकारको मातहतमा आउाछ । हाम्रो पछिल्लो पोलिटब्युरो बैठकले सेना, प्रहरीको पुरानो संरचना नभत्किने हो, पुनर्संरचना नहुने हो भने समायोजन सम्भव छैन भन्ने निर्णय गरेको छ । जनमुक्ति सेनाका कोही पुनस्र्थापनामा र राजनीतिमा जान चाहनेबाहेक बााकीको अलग्गै फोर्स बनायो भने त्यसले सेना समायोजनमा सहयोग पुग्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको ठहर रहेको छ । हमी त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौा ।
०	तपाईंहरूले सरकारको नेतृत्व गर्न वाइसिएलको अर्धसैन्य संरचना भङ्ग गर्नुपर्ने, क्यान्टोनमेन्ट खाली गर्नुपर्ने सर्त कााग्रेस, एमालेलगायत अन्य साना दलहरूले राखेका छन् नि ? यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सर्तसहित आएको होइन । हामी अन्य पार्टीसाग घुाडा टेकेर, आत्मसमर्पण गरेर सरकार बनाउन चाहादैनौा । बरु हामी प्रतिपक्षमा बसेर जनताका एजेन्डाहरूलाई अगाडि उठाउाछौा । सेना समायोजन र संविधान निर्माण प्रक्रिया विगतमा स्वीकृत मान्यताअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । विगतमा भएका सन्धिसम्झौता कार्यान्वयन गर्न हामी दृढ छौा । सरकारको तर्फबाट पनि दृढता आउनुपर्छ । बेपत्ताहरूको खोजी तुरुन्त हुनुपर्छ, त्यसको लागि आयोग बन्नुपर्छ । द्वन्द्वको क्रममा क्षति भएका सम्पूर्ण जायजेथाको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्छ । हामीले विगतमा अपिल गरेर कब्जा गरेका जग्गाजमिन धेरै फिर्ता भइसकेका छन् । बााकी केही छन् भने त्यसलाई समाधान गर्ने तरिका खोजिनुपर्छ । वाइसिएलको अर्धसैन्य संरचना नै छैन । यो आरोप मात्र हो । अर्धसैनिक भनेको त अहिलेको सशस्त्र जस्तै हो । सेना पनि होइन, पुलिस पनि होइन बीचको संगठन अर्धसैन्य हो । त्यस्तो हाम्रो पार्टीमा केही पनि छैन । वाइसिएलको ब्यारेकीय संरचना कहीा, कतै रहेछ भने हामी समाधान गर्न तयार छौा । बुटवलमा युथफोर्सको ब्यारेक छ, त्यस्तै तराईका अन्य भागमा तमलोपाको र लोकतान्त्रिक फोरमको ब्यारेक छ । यी सबै तत्काल हट्नुपर्छ । कुनै पार्टीमा ब्यारेकीय संरचना हुनुहुादैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
०	कााग्रेस, एमालेले जुनरूपमा जग्गा कब्जाको विषयलाई उठाइरहेका छन्, तपाईंहरूले द्वन्द्वकालमा हडप भएको सम्पत्तिको ’boutमा किन जोडतोडले उठाइरहनुभएको छैन ?
हामी कााग्रेस, एमालेलेजस्तो निर्लज्ज तरिकाले विषयवस्तु राख्न चाहादैनौा । दुनियााले देखेको छ थवाङका गाउा जलाइएको, गाउाका गाउाले लुटिएको, हाम्रै नेताका घरहरू बम हानेर उडाइएका छन् । यो कुरा सबैले देखेको छ । किन राज्य वा सत्तामा बसेकाहरूले यो कुरा सुन्न चाहादैनन् भने उनीहरूमा सााच्चिकै रूपमा द्वन्द्व समाधान गर्न चाहादैनन् । हामीले हाम्रो कुरा विगतदेखि राख्दै आएका छौा । तपाइर्ंहरूको यो लोकपि्रय पत्रिकामार्फत् पनि म यो कुरा राख्न चाहन्छु । जति जनताका भााडाकुडा फुटाइएका छन्, सुन-चाादी लुटिएका छन्, घर जलाइएका छन्, खसी, बाख्रा लुटिएका छन् सबै कुराको राज्यले लेखाजोखा गरेर जनतालाई न्याय दिनुपर्छ । यो कुरा पूरा हुन सकेन भन्ने द्वन्द्व कुनै न कुनै रूपमा जारी रहन्छ ।
० वर्षे अधिवेशन सुरु गर्न ढिला भइसक्यो, तपाईंहरू सरकारमा गएर कस्तो खालको बजेट ल्याउनुहुन्छ ?
पुरानो सरकारले बजेटको सामान्य तयारी गरेको छ । हामी सरकारमा गयौा भने त्यसमा धेरै फेरबदल गर्न नसकिएला । तर मुख्य-मुख्य विषयमा हाम्रो प्रयास हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सुचारु गर्ने किसानहरूलाई समयमै कृषि मल, बिऊ सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने काम गर्छौं । कृषि उपजहरूलाई बजार व्यवस्थापन गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ, हामी त्यो गछौा । वनपFmडानी रोक्ने शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने काममा हामी दृढ भएर लाग्छौा ।
० तपाइर्ंहरूको पार्टी सरकारको नेतृत्व गर्न तम्सिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा जनतालाई प्रष्ट पारिदिनुस कि माओवादी पार्टीभित्र कुनै विवाद छैन र हामीले थालेको क्रान्ति पूरा गरेरै छाड्छौा ।
हामी युद्धमा छादा पनि वादविवाद हुने गरेको थियो । हामी माक्र्सवादी दर्शनअनुसार हरेक वस्तुभित्र राम्रो र नराम्रो पक्ष देख्छौा । द्वन्द्व भइराख्दा द्वन्द्वले गति पैदा गर्छ । हामी युद्धकालमा छलफल, बहस संवाद गथ्र्यौं । हामीले अहिले गरेको वादविवाद व्यक्तिगत आकांक्षाको लागि होइन क्रान्ति कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नको लागि हो । वैदेशिक उत्पीडनलगायत अन्य उत्पीडनबाट जनतालाई कसरी मुक्त गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल हुने गरेको छ । पार्टी फुटाउने, गुट-उपगुट बनाउनेतिर हाम्रो पार्टी कदापि लाग्दैन । सम्पूर्ण जनतासाग हाम्रो अपिल के हो भने हामी फेरि पनि अध्यक्षकै नेतृत्वमा क्रान्ति सम्पन्न गर्छौं, अध्यक्षकै नेतृत्वमा सरकारमा जान्छौा र आवश्यक पर्‍यो भने अध्यक्षकै नेतृत्वमा प्रतिपक्षमा बस्छौा तर हामी झुकेर व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर क्रान्तिको मार्गलाई बीचैमा तुहाउने गद्दारी हामीबाट कदापि हुने छैन ।
०	अन्त्यमा आमजनसमुदायलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
मुलुक अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, नयाा संविधान जनताको पक्षमा बन्छ कि बन्दैन निशिचत छैन । जनताको पक्षमा संविधान बनाउन सबै जनसमुदायले दबाब दिन जरुरी छ । फेरि पनि विदेशी शक्तिहरूको आडमा कठ्पुतली सरकार बनाउने प्रयास हुादैछ । सभासद्हरूलाई खसी-बोकाभैFm किनबेच गर्ने षड्यन्त्र हुादैछ । यसको विरुद्ध खबरदारी गर्न र जनताको म्याण्डेटअनुसारको सरकार बनाउन चौतर्फी रूपमा दबाब दिन म सम्पूर्ण जनसमुदायलाई अपिल गर्दछु ।
« प्रमुख समाचार